Yaa sugaya amniga doorashooyinka ka dhacaya maamul-gobaleedyada? | Xaysimo
Home War Yaa sugaya amniga doorashooyinka ka dhacaya maamul-gobaleedyada?
Dowladda Soomaaliya ayaa wada diyaar garow xooggan oo la xiriira sugidda amniga doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dhawaan inkasta oo aan wali heshiis laga gaarin hannaanka doorashooyinka .
Si loo adkeeyo amniga doorashooyinka ayaa dowladdu sameeysay gudi lagu magacaabo guddiga amniga doorashooyinka heer qaran ee 2021, kaas oo uu guddoomiye u yahay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed.
Afhayeenka afhayeenka booliska Soomaaliya, Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) ayaa BBC-da u sheegay in aaney jirin xaruun doorasho oo si gaar ah ay ciidamada dowladda federaalku amnigeeda u sugayaan hase yeeshee waxaa uu xusay in ay jiri doonaan guddiyo amni oo isku dhaf ah oo ka wada shaqeyn doona amniga magaalooyinka la filayo in doorasho ay ka dhacdo .
“Ma jirto xaruun doorasho oo si gooni ah boolisku federaalku ummaamulayo maadama uu gudiga amniga doorashooyinku yahay hay’addo wadaag ah oo isku dhaf ah “ayuu yiri Sadiiq Aadan Cali afhyeenka booliska Soomaaliyeed.
Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) ayaa sheegay in muhiimaddu tahay sugidda iyo xaqiijinta amniga doorashooyinka si taas loo gaarana waxaa uu tilmaamay in xoogga la saari doono qorshayaal kale oo haddaba uu sheegay in ay bilow yihiin kuwaas oo la xiriira amniga doorashada loo madlanyahay hase yeshee aan wali la isu waafaqin qabashadeeda.
Inkasta oo aan wali lagu heshiin hannaanka loo qabanayo doorashooyinka Soomaaliya haddana ciidamadu waxaa howshoodu ku ektahay sugidda amniga dadka iyo deegaannada ay doorashooyinku ka dhacayaan ,
“Guddga amniga doorashooyinka heer qaran ee 2021 waa guddi amni oo dadkii shaqada qaban lahaa iyo siyaasadihii amniga iyo sida loo jaangooyen lahaa dadkii meesha isugu imaan lahaa loona sugi laha aamnigooda waaye howsheenu marka innagu wax siyaasad ah raad kuma lihin waana naga mabnuuc kaliya meelaha doorashooyinka loogu tala galay dhanka amniga ayaan ku shaqo leenahay” ayuu yiri Mr Doodisho.
Horey madaxda Soomaalida waxay ku heshiiyeen in marka kale dalka ay ka dhacdo doorasho dadban taasoo ka dhigan in ergooyiin la soo xulay ay dooran doonaan xildhibaannada barlamaanka.
Afhayeenka Booliska Soomaaliya, Sidiiq Aden Cali, ayaa BBC Soomaali u sheegay in uu socdo qorshe ballaaran oo dhinaca amniga ah oo ku aadan doorashada iyo dadka ka qaybgalaya.
Inkasta oo oo dowladdu ku jirto diyaargarowga amniga doorashada haddana wali khilaaf ayaa ka taagan qabsoomidda doorashada iyadoo dhowr jeer dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada ee ay soo saareen guddiga doorashada oo isaga qudhiisa muran ka taaganyahay.